Gịnị ihe banyere price nke katalọgụ ibi akwụkwọ china?-Blog-Book Mbipụta China
Anyị na-emeghe na-agbake mmepụta dị na mbụ . Anyị ga-ebipụta ma nyefee ngwaahịa gị n'oge. Mmadụ Bịa ka kpaliri anyị,anyị ga-aza gị na 2hours, Daalụ.
Bookmụaka Akwụkwọ Mbipụta
Azụ siri ike Book Printing
Mbipụta Akwụkwọ Akwụkwọ
Sadulu Kpebiri Akwụkwọ
Gburugburu & Akwụkwọ Waya-O daure
Akwụkwọ ịde ihe & Akwụkwọ Journal
Akwụkwọ & Mbipụta kaadị
Flyer & Mpempe akwụkwọ Printing
Ngwunye ụlọ ọrụ
Quality achọpụta System
MOQ(Kacha nta Order ibu)
Nha mara mma
Akwụkwọ a ma ama na ibu akwụkwọ
Ihe Nkwekorita Nkwekorita
Nweta Omenala Quote Ugbu a!!
Softcover Book Mbipụta
Akwụkwọ Mbipụta Akwụkwọ
Kọfị Isiokwu Book Printing
Agba agba Akwụkwọ
Isi nri Book Mbipụta
Ị nọ ebe a : Home>Blog
Gịnị ihe banyere price nke katalọgụ ibi akwụkwọ china?
Oge: 2020-03-13 Hits: 23
Ngwaahịa bipụta katalọgụ bụ ụdị ụdị mbipụta akwụkwọ na-ebi akwụkwọ n'ahịa obibi akwụkwọ, na oru kariri, nke enwere ike iji mee ka ekele nke ndi mmadu n'ozuzu ha, kamakwa maka ịgbasa ozi na ịkwalite. Ya mere, olee ihe ndị ga-emetụta na price nke katalọgụ ebi akwụkwọ china?
Ọ baghị uru ikwu, ka ị na-azụta, dị ọnụ ala karịa na ọ bụ. Nke a bụkwa otu n'ime ihe ndị dị mkpa na-emetụtakwa ọnụahịa nke ibipụta katalọgụ. Ngwaahịa ị na-ịtụ, ọnụ ala otu ọnụahịa ga-adị, nke na-azọpụta ndị na-eri. N’ime ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ, ọnụahịa mmalite nke ngwa obibi akwụkwọ bụ otu, nke ahụ bụ ịsị ọnụahịa otu ihe ahụ, n'agbanyeghị ole ị na-ebipụta, ego dị ukwuu, ka ị na-ebipụta, ọnụ ala ga-adị ọnụ ala.
2. Nhọrọ nke akwụkwọ obibi akwụkwọ dị iche iche
Ọnụahịa akwụkwọ obibi akwụkwọ dị iche iche dịkwa iche, dị ka nhọrọ nke ubé mkpa 157gsm nke art akwụkwọ price bụ dịtụ ala, na oke nke 200gsm nke ubé thicker ntekwasa akwụkwọ price bụ ndammana ọzọ dị oké ọnụ.
Ngwa obibi akwụkwọ emere na China ka dịkwa na ọkwa izizi ya, na ngwaahịa ndị e wetara site na ngwa ndị dị mma ka mma, jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị nke ụlọ ọrụ eji ebi akwụkwọ ebi. Nke a metụtakwara ọnụahịa nke katalọgụ ebi akwụkwọ agbaa.
4. Ihe a haziri
Chọrọ ịrụ ezigbo ọrụ na katalọgụ ibi akwụkwọ, ọkachamara imewe dị oké mkpa, ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakọ ezigbo nkwupụta okwu, ga-etinye atụmatụ ahụ n'ime ya. N'ezie, ma ọ bụrụ na i nwere onwe ha imewe otu iji rụọ ọrụ imewe, ọ nwere ike ịchekwa ọnụahịa nke imewe.
Ojiji nke ink dee dị iche iche dịkwa iche, na-ekpo ọkụ stamping, ink ọla ọcha na-ekpo ọkụ na ọdịiche ọdịnala ọdịnala ọdịnala.
Otu n’ime ihe ndị na-emetụta mbipụta akwụkwọ nke katalọgụ bụ nha. The size, na-ekpebi ego ole akwụkwọ eji.
Maka ama ndi ozo banyere ibiputa, nabata ileta: https://www.bookprintingchina.com/. Ma ọ bụ mee oge atọrọ iji hụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na sales@bookprintingchina.com.
Na Mbụ Page : Methodszọ ndị a na-ejikarị ebi akwụkwọ na China
Next Page : The uru nke jikọtara ebi akwụkwọ technology na katalọgụ ibi akwụkwọ china
Copyright © 2020 BookPrintingChina.com Ikike niile echekwabara.